Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 6-8-21 - iHorror
Mbido Ihe nkiri egwu Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 6-8-21
Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 6-8-21
by James Jay Edwards June 8, 2021 941 echiche
Gịnị bụ ihe, Tightwads! Tightwad Terror Tuesday na-abịaghachi ọzọ na fim ọzọ na-enweghị ihe nkiri. Lelee nke a ...
Annabelle (2014), site n'ikike Warner Bros. Pictures.
Na nsọpụrụ nke Conjuring: ekwensu mere m mee ya, ka anyị lee anya na nke mbụ abụghị-Nhazi Nhazi- Lee ihe nkiri. Annabelle bụ 2014 spinoff nke na-elekwasị anya na akụkọ mmalite nke aha ọjọọ nwere nwa bebi site na oghere mmalite nke ihe nkiri mbụ. A na-echepụta akụkọ ahụ na ndị na-eme ihe nkiri dị larịị, mana ọ bụ ihe nkiri na-atọ ọchị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na eweliri egwu kachasị mma na fim ọzọ.
Annabelle Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọjọọ dịka ndị mmadụ na-echeta na ọ bụ, mana ọ nweghị ebe dị nso Annabelle: Okike (REAL akụkọ banyere nwa bebi). Mee ka nwa bebi gị na-ama jijiji jupụta n’aka nri Ebe a na TubiTV.
Ime anwansi (1978), site n'ikike Twentieth Century Fox.
Na-ekwu maka ụmụ bebi na-adịghị mma…Magic bụ ihe nkiri jọgburu onwe ya banyere ventriloquist nwere ọtụtụ mmadụ ndị na-arụpụta otu n'ime ndị ahụ na ya dum. Ngwunye ya na-ama jijiji.
Ihe nkiri 1978 a gosipụtara ihe ngosi sitere na Sir Anthony Hopkins, Burgess Meredith, na Ann-Margret. Ọ bụ Richard Attenborough duziri ya site na akwụkwọ edemede na akwụkwọ akụkọ site n'aka William Goldman yana akara site n'aka Jerry Goldsmith - nke ahụ bụ ọtụtụ ndị eze Hollywood n'ebe ahụ. Nke a nwekwara otu n'ime trailers kachasị dị egwu mgbe niile, e gosipụtara ya na telivishọn na-agbasa ozi, n'ihi ya, ọ na-emetụta ọgbọ dum nke ụmụaka. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ Hannibal Lecter ihu na The Penguuin, laa Ebe a ma lelee Anwansi na Crackle.
Solace (2015), site n'ikike FilmNation Entertainment.
Nkasi obi bụ ihe omimi nke 2015 gbasara onye ọrụ FBI nke na-achọ enyemaka nke onye mmụọ iji nyere ya aka ijide onye na-egbu egbu. O di nwute na ezi ndi mmadu, onye gburu mmadu bu onye uche, ya mere o noro uzo n’ihu nyocha ha.
Nkasi obi bụ onye maara ihe na-eme mpụ na-atọ ụtọ, juputara na ntụgharị na ntụgharị nke ọbụnadị na mmụọ ọgụgụ isi enweghị ike ịkọ. Emechara ya ka ọ bụrụ ihe na-aga n'ihu Se7en, nke na-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma. Ihe nkiri a bụkwa ọkwa mbụ, ya na Sir Anthony Hopkins (ọzọ) dị ka onye uche, Jeffrey Dean Morgan dị ka onye ọrụ FBI, yana Colin Farrell dịka onye na-egbu. Nyochaa Nkasi obi Ebe a na Vudu.
A History of Violence (2005), site n'ikike New Line Cinema),
Akụkọ banyere Ime Ihe Ike bụ ihe gbasara otu onye ọchụnta ego bi n’obodo nta nke mere ka ọ ghara izu ohi n’ime otu nri abalị. Akụkọ ndị a na-eso ya mere ka ọ bụrụ onye ama ama n’obodo, nke dọtara uche nke onye moba na-eche na ọ na-amata dike a dịka nwoke mejọrọ ya n’oge gara aga. N'ezie, a na-achọ imegwara.
Akụkọ banyere Ime Ihe Ike bụ ihe nkiri David Cronenberg, mana o sitere na 2005, yabụ ọ bụ otu n’ime ihe nkiri Oscar-azụ ya nke na - esote, ọ bụghị otu n’ime azụ gooey schlock mbụ ya. Viggo Mortensen na-agba dike, Maria Bello bụ nwunye ya, Ed Harris gosipụtara dị ka mobster ahụ. Lelee Akụkọ banyere Ime Ihe Ike Ebe a na TubiTV.
Snowpiercer (2013), site n'ikike RADiUS-TWC.
Mgbe anyị nọ n'isiokwu banyere Oscar-bait…Snowpiercer bụ Academy Ward Winner Bong Joon Ho's thriller banyere ụgbọ oloko na-aga mgbe ọ bụla na ụwa post-apocalyptic, nke snow kpuchiri. N’ime ụgbọ oloko ahụ, a na-ekewa ndị mmadụ na klaasị mmekọrịta ọha dịka ha si n’èzí.
Ihe nkiri 2013 a gosipụtara usoro telivishọn n'afọ gara aga. Ọ bụ ezie na Bong Joon Ho's Oscars abụghị maka nke a (ha bụ maka Parasa), ị gaghị ama site na kpakpando ahụ, nke gụnyere Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt, Jamie Bell, Octavia Spencer, Ed Harris (ọzọ) na Alison Pill. Iwuli elu na Snowpiercer Ebe a na IMDB TV.